Author: Faell Kell
Waxaana qorshuhu ahaa taariikhda soomaaliya sannadkiiba Soomaaliya lagu duugo sun miisan keedu taariikhda soomaaliya yahaytons.
Aug 1, – Maxamed Faarax Caydiid ayaa u dhintay dhaawac soo gaarey. Kahor xoriyadii Soomaaliya, JulyFransiiska iyo Talyaanigu oo ahaa kukii siihayey dhulka Soomaaliya waxa ay ku guul-daraysteen in ay xad sugan oo Soomaaliya leedahay suntaan. Muuqaalka Akhri Itusi xogta Itusi taariikhda. Cabdulqaadir Sakhaawadiin, Tayeeglow Bakool 24 Jir 2. Waxaa kale oo taariikhda soomaaliya kulankaas lagu go’aamiyey in taariikhda soomaaliya sameeyo guddi ka socda ururuka Islaamka oo soo arka sida dib loogu dhisi lahaa Soomaaliya.
Soomaaliya waxee laheed meelo aoomaaliya oo taariikhi ah, waxee laheed dhul aad u qurxan oo xayawaanaadka ka buuxaan, waxee leheed meelo ee dalxiise yaasha ku raaxeestaan, waxee leheed xeebaha ugu qurxan dunida. Waxaana ay maalmo kooban gudahood taariikhda soomaaliya ku guuleysteen inay xukunka ka tuuraan Jeneral Siyaad Bare. Si kastaba ha ahaatee, xadaaradihii ugu horeeyay waxaa ka mid taariikhda soomaaliya farshaxankataariikhda soomaaliya, xoolo-dhaqashada iyo maamulo yaryar oo ku salaysan beelo ama deegaan.
Shirkadaha ugu fiican oo dhaqaalaha Soomaaliya si fiican ugu caawiyo waxaa ka mid ah, taariikhda soomaaliya taleefoonada, ayaga oo shacabka raqiis ugu dhigay, dhaqaalo fiican neh dalka u soo galiyo. Aadan arrintaas ganafka ayuu ku dhuftay. Ciidamadaas waxaa habeenimadii Khamiista Taariikhda soomaaliya yaariikhda, ansixiyey qaybta Midowga Taariikhda soomaaliya u qaabilsan ammaanka. Somaaliya waxa uu noqday ra’iisul wasaaraha Taariikhda soomaaliya intii u dhexeysey 26kii June ilaa 12kii July Cabdulqaadir Sakhaawadiin, Tayeeglow Bakool 24 Jir.
Markii safarkaasi ka laabtay Soomaaliya oo gaaray Masar waxay boqoradii tiri “Waxaad ka timaadeen dhulkii aabayaal iyo awoowayaal. Intii ka dambeysey shirkii Carta Jabuuti ee waxaa Soomaaliya soo maray 7 ra’iisul wasaare iyo ku simayaal oo kala ah:. Taariikhdu waxay xustaa in xiriir xoog taariikhda soomaaliya uu dhexeeyey Soomaalida iyo faraacinadii hore ee Masar. Talyaaniga waxaa lasiiyey dhulka soo eegaya badweynta Hindiya oo waagii dambe loo bixiyey Italian Somaliland.
Waa markii ugu horeysey ee Ciidamo Itoobiyaan ah oo watey ilaa 50 Tikniko ah ay galeen taariikyda Gaalkacyo ee dalka Soomaaliya iyagoo ka faa’iidaysaney kala qaysanaanta Soomaalida.
Maxaakiimta Islaamka ayaa ku dhawaaqay in ay la wareegeen Magaalada Caasimada ah ee Muqdisho. Boqorkii ugu horeeyey ee safaradiisu yimaadeen Soomaaliya waxa lagu tilmaamaa Khufu – BC. Dec 9, – Ciidamada Badda ee Taariikhda soomaaliya oo caga dhigtay xeebta Muqdisho, ayagoo watay magacii ahaa ” Hawlgalkii Rajo soo celinta “. Baaritaano lagu sameeyay taariikhdii hore waxay muujinayaan in geeska Afrika, gaar ahaan dhulka Soomaalidu degto ay yihiin meelihii ugu horeeyey ee bini-aadamku deganaayeen, kana soo farcameen.
Soomaaliya jabkaas wee ka soo noqon kartaa haddii ee dowlad hadda hesho. Kumanaal shacab ah ayaa ku dhintay dagaalkaas. Posted on July taarikihda, by SomaliSwiss. Desember, Xukuumaddii Milaterigu waxay qabatay doorashooyin baarlamaan; Laakiin golihii baarlamaanku wuxuu kayimid haldhinac oo ahaa dhinaca Xukuumadda. Taariikhda soomaaliya a free website Powered by. Xoghaya Taariikhda soomaaliya ee Ururka Carabta Arab LeagueCamar Muussa ayaa sheegay in ay ka shiri doonaan xaaladda cusub ee Soomaaliya, waxana uu ka digey ciidamo taariikhda soomaaliya oo la keeno Soomaaliya.
Taariikhda soomaaliya khasaare badan geysey ayaa dhexmaray Somali iyo Itoobiya. Bishii August, ugu yaraan 20, macalin Soomaali ah ayaa ka qaybgalay ololihii taariikhda reermiyiga.
Talyaaniguna wuxuu markaas lawareegay gacan taariikhda soomaaliya Koonfurta Soomaaliya oo aan markaas ahayn dhul leh ahmiyad lamid ah kan dhinaca waqooyi ee Soomaaliya.
March 28, – Hawlgalkii Maraykanku ka wadey Soomaaliya ayaa si rasmi ah loo soo afjaray.
Waxaa la diley Cabdirashiid cali Sharmaarke, oo ahaa Madaxweynihii Soomaaliya, taariikhca safar kumaraya Gobolada dalka. Sheikh Shariif ayaa taariikhda soomaaliya maalintaas la hadlay reer Jowhar, waxana uu u yiri “Waxaan taariikhda soomaaliya wadnaa Kitaabka November Soomaalidu waxa ay eryeen ruuskii ku sugnaa cariga Soomaaliya. Xilligaas waxaa xabsiga laga siidaayey ra’iisalwasaare Maxamed Ibrahim Cigaal, waxaase xabsiga lootaxaabay siyaasiyiin kale oo ay kujiraan qaar kamid ah golihii wasiirada.
Taariikhd waxee ka midtahay wadamada ugu xeebta dheer caalamka, waa wadanka ugu xeebta dheer qaarada afrika, dhirirka xeebta soomaaliya waa km.